परदेशीको दसै : तोयानाथ पौडेल – email khabar | Latest news of Nepal
परदेशीको दसै : तोयानाथ पौडेल
प्रकाशित : २०७१ असोज ९ गते १७:४९
बाबा अहिले पनि चुहुदो झरिमा घाँसका भारी बोकेर खाली खुट्टा कुनै उकालो चढ्दै हुनुहुन्छ होला ! र अँझै पनि पाईतालाले कुल्चिएका हरेक कुल्चाईमा सन्तान दुख कुल्चिएको महशुस गर्नुहुन्छ होला ! र मेरो दिर्घायु र कार्यसफलताको आशिस अलाप्नु हुदो हो ! बाबा म भर्खर तपाईलाई बुझ्ने भएको छु । जब तपाई हजुर्बा हुनुभयो सन्तान प्रति बाबाआमाले गर्ने स्नेह मैले त्यतिबेला महशुस गरेको हुँ । मैले तपाईका दुखलाई साथ दिन सकेको छैन तर अवश्य एक दिन म तपाईंसँग काँधमा काँध मिलाउन आउने छु ।
आमा उस्तै आँगन को डिलबाट क्षीतिजसम्म हेर्दै मेरो प्रतिविम्ब याद गर्दै हुनुहुन्छ होला । मैले गर्ने हरेक फोनमा आमाका शब्दले म निशब्द हुन्छु । मसँग जबाफ हुदैन । ‘साखासन्तानमा कसैलाई बिदेश जानु परेको छैन तँलाई किन जानु पर्यो ?’ हिड्ने बेलाको यो सब्द कानमा गुञ्जिरहन्छ आमाको ।
यो दसै म बिना मान्नु होला आगामि दसैमा मलाई कुनै सक्तीले रोक्ने छैन !
दुर्गा माताको आशीर्वादले सबैको कल्याण हुने छ । प्रणाम!!!
दशैँमा घरको सम्झना : रोशन मिश्र
दशैँ : जीवन ‘पीडित’ दहाल